Dagaalka koobka cusub ee European Super League oo cirka isku sii shareeray + FIFA iyo UEFA oo ganaaxyo dul dhigay koox kasta oo tartankaas ka qayb gasha + Maxaa lagu ciqaabayaa ciyaartoyda ka qayb gasha tartanka cusub?
Madaxweynaha Xidhiidhka kubada cagta yurub ee Aleksander Ceferin ayaa ka hadlay ganaaxyada ay wajihi doonaan kooxaha 12-ka ah ee bilaabay tartanka European Super League
Aleksander Ceferin ayaa sheegay in sidoo kale la ganaaxi doono dhamaan xiddigaha ka qayb gala tartamada ay bilaabeen kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub ee European Super League. Xiddigaha reer yurub ayaa laga reebi doonaa tartanka Euro-da ee la filayo in ay xagaaga dhacdo ee la baajiyay sanadkii hore ee 2020. Dhanka kale Xidhiidhka kubada cagta adduunka FIFA iyo waliba Xidhiidhka yurub ee UEFA ayaa si Rasmi ah u shaaciyay ganaaxyada dusha laga saari doono dhammaan xiddigaha iyo Kooxaha ka qayb gala tartanka cusub ee European Super League.
Xidhiidhada kubada cagta yurub iyo adduunka ee UEFA Iyo FIFA ayaa si Rasmi ah u shaaciyay in ganaaxyo dusha laga saari doono dhamaan xiddigaha iyo kooxaha ka qayb gala tartanka cusub ee European Super League. Kooxaha Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United & Tottenham ayaa ka mid ah kooxaha ogolaaday in ay ka qayb gali doonaan tartanka. FIFA iyo UEFA ayaa soo saaray warbixin u qoran sidan: “Koox kasta iyo xiddig kasta oo ka qayb gala tartanka European Super League,
waxa laga mamnuuci doonaa in ay ka qayb galaan tartamada yurub iyo waliba adduunka ee kubada cagta”. Arintaas ayaa la macno ah in xiddig walba oo ka qayb gala tartanka in ayna ka qayb gali doonin tartamada yurub ee xulalka iyo waliba koobka adduunka iyo tartan walba oo hoos yimaada xidhiidhka FIFA.